Isihlalo Esinamasondo Siwuhlobo
Isihlalo Esinamasondo Siwuhlobo I-ancer, imibhede evimbela ukuhamba ngesihlalo esinamasondo, ayigxili kuphela ekujuleni kokuhamba kwayo, kepha nenduduzo yesiguli, ikakhulukazi labo abayisebenzisayo isikhathi eside. Idizayini entsha ne-airbag enamandla eyakhelwe esihlalweni sesihlalo, nesibambo esiguquguqukayo, siyayihlukanisa ngesihlalo esinamasondo esivamile. Ngomzamo omningi otshaliwe, ukwakhiwa kwesihlalo esinamasondo kwaqedwa futhi kwafakazelwa ukuthi kusiza ukuvikela imibhede. Isixazululo nemigomo yokwakheka isuselwa emiphumeleni eqoqwe kubasebenzisi abasebenzisa izihlalo ezinamasondo, okuholela kulwazi lomsebenzisi oluyiqiniso.
Msombuluko 27 Septhemba 2021
Ukwakhiwa Kwe-Web Futhi U-Ux
Ukwakhiwa Kwe-Web Futhi U-Ux Iwebhusayithi ye-Sí, Me Quiero yisikhala esisiza ukuba ube ngokwakho. Ukuze kwenziwe lo msebenzi, bekufanele kwenziwe izingxoxo zokuhlolisisa kanye nesimo senhlalo nesiko maqondana nabesifazane kwadingeka ukuba sihlolwe; ukuboniswa kwakhe emphakathini futhi naye. Kwaphethwa ngokuthi i-web kuzoba yinto ehambisana nayo futhi izokwenziwa ngendlela yokusiza ukuzithanda. Emklamo kukhonjiswa kalula ngamathoni angathathi hlangothi esebenzisa umehluko obomvu ukudonsela ukunakekela ezenzweni ezithile, imibala yohlobo lwencwadi eshicilelwe iklayenti. Ukuphefumlelwa kwaqhamuka kubuciko be-constructivism.
Ukwakhiwa Kwelebula Le Wayini
Mgqibelo 25 Septhemba 2021
Ukwakhiwa Kwelebula Le Wayini Ukuzama ukunambitha i-wayini inqubo engaqedi eholela ezindleleni ezintsha kanye nama-aromageyisi aphambukayo. Ukulandelana okungenamkhawulo kwe-pi, inombolo engenangqondo ene-decimals engapheli ngaphandle kokwazi eyokugcina yazo kwaba ugqozi lwegama lalezi zinwa ngaphandle kwama-sulfites. Idizayini ihlose ukubeka izinto eziwuchungechunge lweewayini ezingama-3,14 endaweni yokubukisa esikhundleni sokuzifihla phakathi kwezithombe noma ihluzo. Ukulandela indlela minimalistic futhi elula, ilebula libonisa kuphela izici zangempela zalezi zinhlobo zemvelo njengoba zingabonakala kubhukwana lika Oenologist.
Ukusebenza Kwamandla Kwamabhuloho Ezinyawo Kuyizinhlobo
Lwesihlanu 24 Septhemba 2021
Ukusebenza Kwamandla Kwamabhuloho Ezinyawo Kuyizinhlobo Amadolobha amakhulu omhlaba - njengeBeijing - anenani elikhulu lamabhuloho okuhamba ngemithambo yemoto ematasa. Imvamisa ayisebenzi, yehlisa ukubuka okujwayelekile kwedolobha. Umbono wabaklami wokumboza amabhuloho ezinyawo ngebuhle, amandla akhiqiza amamojuli wePV futhi awaguqule abe izindawo ezikhangayo zedolobha awagcini ngokugcinakalayo kepha adala ukwahlukahlukana okuyisakhiwo esiphenduka umdwebi wamehlo edolobheni. Iziteshi zokushaja ze-E-car noma i-E-bike ngaphansi kwamabhuloho ezinyaweni zisebenzisa amandla elanga ngqo esizeni.
Lwesine 23 Septhemba 2021
Incwadi Uchungechunge lokuhlelwa kwezincwadi lwemisebenzi eqoqwe yokubhala kwendabuko yamaShayina yendabuko nokupenda kushicilelwa yiNanjing Zhuzi Art Museum. Ngomlando wayo omude kanye nenqubo enhle, imidwebo yesiShayina yendabuko kanye ne-calligraphy kuthokozelwa ukukhanga kwabo okubuciko futhi okusebenzayo. Lapho kwaklanywa iqoqo, kwakusetshenziswa bobunjwa obuyimfihlo, imibala nemigqa ukudala umuzwa ongaguquki nokugqamisa isikhala esingenalutho emidwebo. Ukungasebenzeki kuhlangana nabaculi ngokupenda kwendabuko nezitayela ze-calligraphy.
Illusion Iwebhusayithi Mgqibelo 27 Novemba
Smartstreets-Smartbin™ Ugwayi / I-Gum Bin Lwesihlanu 26 Novemba
Shayton Equilibrium Hypercar Lwesine 25 Novemba
Isihlalo Esinamasondo Siwuhlobo Izithomba Ze-3D Ukwakhiwa Kwe-Web Futhi U-Ux Ukwakhiwa Kwelebula Le Wayini Ukusebenza Kwamandla Kwamabhuloho Ezinyawo Kuyizinhlobo Incwadi